June 3, 2021 June 3, 2021 adminLeaveaComment on घरमा लक्ष्मीमातालाई खुसी पार्न यो समयमा मात्र कुच्चो लगाउनुपर्छ…!थाहा पाउनुहोस
काठमाडौं । हिन्दुधर्म अनुसार हरेक कामको आ -आफ्नै समय हुन्छ । जुन समय हाम्रो शास्त्रमै तोकिदिएको हुन्छ । रातमा कुच्चो लगाउदा लक्ष्मी रिसाउने र दरिद्रताको जन्म हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ । यति लाउनै पर्ने अवस्था आयो भने घरबाट निस्केकको फोहोरलाई एउटा भाडोमा वा एक स्थानमा उठाएर राख्ने गर्नुपर्छ । बाहिर फ्याकेमा धनकी देवी लक्ष्मी […]
June 3, 2021 adminLeaveaComment on बिहिबार यी काम भुलेरपनि नगर्नुहोस् ठूलो अनिष्ट हुनसक्छ !
धार्मिक मान्यता अनुसार हप्ताका सात दिनको आफ्नै छुट्टाछुट्टै महत्व छ । ब्रम्हाण्डमा अवस्थित ९ ग्रहको गुरु मानिने वृहस्पतिको दिन मानिने बिहीबार धार्मिक दृष्टीले निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । बिहीबार गरेका धार्मिक कार्यको फल तत्काल मिल्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । बिहीबार के गर्ने धार्मिक महत्वका साथ गरिने पूजा आजामा दुई महत्व हुन्छ । त्यसैले गर्न हुने र […]
June 3, 2021 adminLeaveaComment on बिहान उठ्ने बित्तिकै आफनै हातको दर्शन गर्दा हुन्छ यस्ताे फाइदा !
मानिसहरूलाई पूर्ण विश्वास छ कि प्रार्थनाले उनीहरूको समस्या समाधान गर्दछ। विहान उठेर हत्केलाको दर्शन गर्नाले हुन्छ दिन नै शुभ । हाम्रा दैनिक जीवनका पनि संस्कार छन् । दैनिक संस्कार पालना गर्न सक्यो भने जीवन सुखमय हुनसक्छ । दिनचर्याको शुरुवात जहिले पनि विहान उठेपछि हुन्छ । विहान उठ्ने वित्तिकै हामीले जे गर्छौ त्यसको प्रभाव दिनभरी रहन्छ […]
धर्ममा आस्था राख्नेका लागि ईश्वर सर्वशक्तिमान हुन् । ग्रह–नक्षत्र तथा देवी–देवता सबै ईश्वरको अधिनमा हुन्छन् । ईश्वर पछि प्रकृति महत्वपूर्ण हुन्छ । जसप्रकार प्रकृतिले रोग, शोक या अन्य घटना, दुर्घटना सिर्जना गरेको हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले त्यस्ता रोग, शोक या घटना दुर्घटनाबाट बच्ने उपाय पनि दिएको हुन्छ । प्रकृतिमै ती सबै उपाय छन्, जसबाट तपाईले आफ्नो […]
June 3, 2021 adminLeaveaComment on बिल्कुलै बेवास्ता नगरी ॐ लेखी सेयर गर्नुहोला तपाईको जीवनमा धनको बर्षा हुनेछ
हिन्दूहरुको आस्थाको प्रतीक तथा जीवित देवताको रुपमा पूजा गरिने गाईलाई किन मान्न थाले हिन्दू धर्मालम्बीहरुले ? धेरैलाई गाईको बारेमा चिन्न सकिरहेका नहुनपनि सक्छन् । नेपालको राष्ट्रिय जनावर पनि हो गाई । तर, वैदिक परम्परामा गाईको महत्व भने एकदमै धेरै देखाईएको छ । हिन्दू धर्मको ४ वेदमध्ये चारवटै वेदमा गाईको स्पष्ट महत्व देखाईएको छ । आखिर […]
June 3, 2021 adminLeaveaComment on कहिलै नगर्नुहोस् यी ५ गल्ती, नत्र जति मेहनत गर्दा पनि सफलता मिल्दैन्
काठमाडौँ । घरका कुनै पनि सदस्यले पुरै मेहनत र ईमान्दारीसँग काम गर्दा पनि सफलता प्राप्त हुँदैन् भने वास्तुशास्त्रसँग जोडिएको कुनै गल्ति भएको हुन सक्छ। सुन्नमा त ती कुरा सामाधारण लाग्न सक्छन्, तर ती कुराले जीवनमा निकै ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ। ती कुरामा ध्यान नदिदा कयौँ समस्या वा उल्झनमा पर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले विभिन्न समस्याबाट छुटकारा […]
घरबाट गरिबी भगाउन भगवान श्रीकृष्णले दिएका थिए यस्तो उपाय
June 3, 2021 adminLeaveaComment on घरबाट गरिबी भगाउन भगवान श्रीकृष्णले दिएका थिए यस्तो उपाय
भगवान् श्रीकृष्णले केही यस्ता वस्तुबारे वर्णन गरेका छन्, जसलाई घरमा राखेर सामान्य मनुष्यले पनि दरिद्रता (गरिबी) भगाउन सक्छ । सनातन धर्मका पौराणिक दस्तावेज र शास्त्रहरूमा मनुष्य जीवनका हरेक ठूलासाना समस्याका समाधान बताइएको छ । महाभारतका अनुसार एकचोटि जेठा पाण्डव युधिष्ठिरले श्रीकृष्णलाई सोधेका थिए, ‘घरमा सधैं सुख समृद्धि रहोस् अनि धनधान्यको कमी नहोस् भन्नका लागि के […]
June 3, 2021 adminLeaveaComment on तीर्थयात्रीहरुले भेटीपातीको रुपमा चढाएको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरामा ६८ तोला सुन संकलन
ताप्लेजुङ- प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरामा दुई वर्षको अवधिमा ६८ तोला सुन संकलन भएको छ । तीर्थयात्रीहरुले भेटीपातीको रुपमा चढाएका ६८ तोला सुन संकलन भएको सुनचाँदी व्यवस्थापन उपसमिति सदस्य गोपाल न्यौपानेले बताए । न्यौपानेका अनुसार ५४ तोला ५७ लाल सुन ९१ नम्बरी० र १४ तोला ६६ लाल ९२ नम्बरी० गरी ६८ तोला बढी सुन संकलन भएको हो […]
समय: बिहानी सवा ६ बजे, स्थान: कालेश्वर, सकुन्दा पर्वत (ललितपुर) एकाबिहानैको हावाको बेग २५ सय मिटर उचाईमाथि फनफनी घुमिरहेको छ । ७३ वर्षीय रामभक्त महर्जन कालेश्वर महादेव देख्नेबित्तिकै भावविह्वल भए । घर बस्दा कटकटी दुखिरहने उनका गोडा मन्दिर पुगेपछि तङ्रिएका छन् । उमेरसँगै सुगरले सताइएका ज्येष्ठ नागरिक रामभक्त झन्डै २० मिनेटको ठाडो उकालो चढेर डाँडाको […]
जय नागदेवता: भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ दुई मुखे नाग, फोटोलाई छोएर जय नागदेवता लेखि एक सेयर गर्नुहोस् । June 14, 2021
घरमा लक्ष्मीमातालाई खुसी पार्न यो समयमा मात्र कुच्चो लगाउनुपर्छ…!थाहा पाउनुहोस June 3, 2021
बिहिबार यी काम भुलेरपनि नगर्नुहोस् ठूलो अनिष्ट हुनसक्छ ! June 3, 2021
बिहान उठ्ने बित्तिकै आफनै हातको दर्शन गर्दा हुन्छ यस्ताे फाइदा ! June 3, 2021
के तपाई पनि आफ्नो भाग्य चम्काउन चहानुहुन्छ? नछुटाई पढ्नुहोस यो जानकारी June 3, 2021